Conga Contract Lifecycle Management: Meziwanye Arụ Ọrụ Ego na Akwụkwọ Njikere Arụaka Akụrụngwa | Martech Zone
Conga Contract Lifecycle Management: Meziwanye Arụ Ọrụ Ego na Akwụkwọ Njizi Arụaka
Saturday, October 10, 2020 Saturday, October 10, 2020 Douglas Karr
Duzụ ahịa na-eche na ọ na-enweghị isi na onye ahịa na ahịa nke na-abawanye na mgbagwoju anya abụghị ihe dị mfe. Ihe omuma Conga na uzo zuru oke maka oru ahia - usoro ndi gbara ya gburugburu Hazi Ahịa Quote (CPQ), Ahịa Ndụ Ndị Ahịa (CLM), na Akwụkwọ dijitalụ - enyere aka ulo oru jiri obi ike mee mgbagwoju anya na ha nwere ike inye ahụmịhe ndị ahịa na-enweghị nghọta ma na-emezi ngwa ahịa.
Na Conga, azụmaahịa na-aga ngwa ngwa iji gboo mkpa ndị ahịa taa ma na-abawanye ụba iji kwadebe maka echi a na-ejighị n'aka. Ezubere Conga's Digital Document Transform Suite ka ọ rụọ ọrụ na ngwakọta teknụzụ ụlọ ọrụ gị ma jikọta ya na CRM gị.
Kedu ihe bụ nkwekọrịta Ndụ Ndụ?
Ndụ Lifecycle Management bụ ihe na-arụ ọrụ, usoro nhazi usoro nke nkwekọrịta site na nnabata site na ntinye, nnabata, na mmeghari ohuru. Imejuputa CLM nwere ike iduga na oganihu di ukwuu na ichekwa ego na oru oma.
Conga nkwekọrịta Lifecycle Management
Conga CLM bụ njedebe na njedebe nkwekọrịta ndụ ndụ (CLM) ngwọta nke na-agwụ oge nke usoro ntuziaka na nkwekọrịta nkwekọrịta na-eweta ahụmịhe dị elu karịa maka ndị ahịa n'ime na ndị mpụga. Conga CLM na-eme nkwekọrịta kacha mma na ọkwa, na-ebelata oge okirikiri, na-emeziwanye mkparịta ụka, ma na-ebelata ihe egwu. Wuru na igwe ojii, Conga na-ejikọ na-enweghị njikọ na ngwọta CRM iji mee ka arụmọrụ azụmahịa dị mfe. Conga na-enye ngalaba niile ikike na njem ha iji nweta ọmarịcha azụmaahịa.
Ihe nghazi zuru oke nke Conga na-enye ike ịnweta ego, arụmọrụ, yana otu ndị otu iwu iji dozie nsogbu nke azụmaahịa dị mfe. Anyị dị ugbu a iji nyere aka mee ka azụmahịa ahụ kwalite, kwalite arụmọrụ, ma gbanwee ahụmịhe ndị ahịa. Na azịza maka ụdị azụmaahịa ọ bụla, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị zute azụmaahịa kpọmkwem ebe ha ga-eme ka ọhụụ doro anya maka ebe ha ga-aga.
Frank Holland, onye isi oche nke Conga
Conga CLM bụ ngwa njikwa nkwekọrịta izizi iji jee ozi n'ọkwa niile nke ntozu okè site na novice ruo ọkachamara maka nkwekọrịta niile. Ahịa iwu enwetabeghị otu onyinye na-esi na njedebe dị ala ruo na njedebe nke usoro ntozu okè. N'ihi ya, Conga CLM abụghị naanị nnukwu maka ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa, mana ikike ụlọ ọrụ dị ugbu a maka SMB / azụmaahịa ọkara nwere obere ego.
Ndị ọrụ ahịa Salesforce nwere ike ijikwa nkwekọrịta ozugbo na ngwa ahụ ka ị na-akpaghị aka usoro ndụ ndụ (CLM) site na okike ruo mbinye aka. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana ndị ahịa gị nwere ike ịchekwa ma jikwaa nkwekọrịta na-enweghị nsọtụ, mepụta akụkọ, soro mmekọrịta, yana ọtụtụ ndị ọzọ.
Akwụkwọ arụmọrụ Conga akpaaka
Akwụkwọ Conga na-eme ka akwụkwọ niile dị mfe ma na-abawanye kwa ụbọchị ma na-ahapụ ndị ọrụ ka ha wee mee ọtụtụ ihe. Ndị otu nwere ike ịmepụta, jikwaa, rụkọta ọrụ na, wee depụta dọkụmentị niile metụtara azụmaahịa a.
Akpaaka na-ewepụ ọrụ ahụ na usoro ma na-ewepụ usoro ndị ọrụ nwere ike iduga mmejọ, na-echekwa oge bara uru, ma na-eme ka arụmọrụ na arụpụta ihe. Nwee ike, arụmọrụ eSignature na-eme ka ọ dị mfe karịa mgbe ọ bụla ịmechaa azụmahịa-dị oke egwu, akwụkwọ iwu kwadoro na ebe ọ bụla. Na Conga Documents 'ngwọta, azụmaahịa azụmaahịa na-ekwe nkwa ịsọ ọsọ.
Gịnị bụ hazi, Ọnụahịa, Quote (CPQ)?
Hazie, ngwanrọ ọnụahịa sọftụwia bụ okwu ejiri na azụmaahịa azụmaahịa na-azụ ahịa (B2B) iji kọwaa sistemụ sọftụwia na-enyere ndị na-ere ahịa aka iwepụta ngwaahịa dị mgbagwoju anya ma nwee ahazi.
Conga hazi, ọnụahịa, Quote Solution
Conga CPQ na-bụ hazi price quote (CPQ) nke na - eduzi ndị na - ere ahịa iji wuo ma bulie onyinye site na inye ndị na - ere ahịa ikike ịhọrọ ngwakọta ngwaahịa na ọrụ kachasị mma (ndenye aha, ọrụ azụmaahịa, yana ọrụ ọkachamara) site na katalọgụ zuru ụwa ọnụ. Conga CPQ na-ahazi azịza, mepụta ụdị ọnụahịa, ma na-ewepụta ọnụego kachasị mma iji merie azụmahịa. Conga CPQ na-eme ka ahụmịhe ahụ na-ere site na mmata nke onye zụrụ ahịa na ebumnuche ịzụta site na ịzụta ihe, na-enyere ndị otu aka inweta ọmarịcha azụmaahịa site na inye ndị otu ahịa ike ka ha ree obere oge.
Teknụzụ teknụzụ na-eme ka azụmaahịa ọ bụla nwee, gafee ụlọ ọrụ niile gburugburu ụwa, ka ha wee nwee ike ịgbanye akwụkwọ na nkwekọrịta na-eme ka azụmaahịa ha na-aga. Nsonaazụ na-enye ego echekwa ego, oke uru dị elu, ịnweta ngwaahịa na ọrụ ngwa ngwa, yana ọsọ ọsọ nke azụmahịa.
Nweta Congo Demo
Tags: b2bcongakpoo clmebe cpqnkwekọrịta akpaakankwekọrịta nkwekọrịtacpqCRMnjikwa ndụ ndị ahịanjikwa akwụkwọesigniwendị ahịaarụ ọrụ arụmọrụ
Ihe mere eji ere ahịa oge abụrụla ihe dị mkpa na COVID Era
Ntuziaka maka ndị na-ere ahịa Banyere Njirimara ọgụgụ isi (IP)